CIN Khabar एङ्गला युगको अन्त्य, महिला नेतृत्वमा सुशासन
एङ्गला युगको अन्त्य, महिला नेतृत्वमा सुशासन नेपालमा कहिले पुग्लान कार्यकारी पदमा महिला ?
स्नेहा कर्ण बिहिबार, असोज २१, २०७८, ०२:१४:००
एङ्गला मर्केल ।
काठमाडौँ । विश्व परिवेशको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने, नेतृत्व तहमा महिला पुगेको कमै मात्र छ । हरेक दृष्टिकोणले शक्तिशाली रहेका मुलुकहरूमा पनि महिला उच्च तहमा पुगेको कमै देखिन्छ ।
वर्ल्ड पपुलेशन रिभ्यूका अनुसार विश्वका २० शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।
विश्वका १० शक्तिशाली मुलुकहरूको सूचीलाई हेर्ने हो भने अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, रुस तेस्रो, जर्मनी चौथो, बेलायत पाँचौ, जापान छैटौँ, फ्रान्स सातौँ, दक्षिण कोरिया आठौँ, साउदी अरब नवौँ र संयुक्त अबर इमिरेटस (दुबई) दसौँ स्थानमा रहेको छ ।
तर इतिहास हेर्ने हो भने यी मुलुकमध्ये केहीमा मात्रै महिला उच्च नेतृत्व तहमा पुगेका छन् ।
सन् १९६० मा श्रीलङ्काको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री शिरिमावो बन्दरनाइके बन्नुभयो । उहाँलाई विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छ । भारतमा इन्दिरा गान्धी विश्वको दोस्रो र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
इन्दिरा गान्धीलाई भारतको शक्तिशाली महिलाको रुपमा पनि चिनिन्छ । कारण, उहाँले महिलाका शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न नीति निर्माण, कानून र योजना ल्याउनुभयो ।
यसरी नै हेर्ने हो भने इजरायलमा गोल्डा मेइर विश्वको तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने मार्गरेट थ्याचर बेलायतको पहिलो र विश्वको चौथो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
भिग्डीस फिन्बोग्याडोट्टीर आइसल्याण्डको पहिलो र विश्वको पाँचौ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने एङ्गला मर्केल जर्मनीको पहिलो र विश्वको छैटौँ महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिनुहुन्छ । पुरुष सत्तात्मक सोँचका बावजुद महिलालाई उच्च नेतत्व तहमा पुग्न र पुर्याउन सहज भने थिएन ।
तर, पार्टीको सोँच र परिवर्तनका कारण यसलाई सम्भव बनाएको देखिन्छ । सन् १९८९ मा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका एङ्गला मर्केलले ३५ वर्षको उमेरमा नै जर्मनीको सांसद बन्नुभयो ।
क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन (सीडीयू) पार्टीमा आवद्ध उहाँ सन् २ हजारमा पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो र त्यसको पाँच वर्षपछि जर्मनीको पहिलो महिला चान्सलर बन्नुभयो ।
आर्थिक, राजनीतिक, आणविक, हरेक दृष्टिकोणले सक्षम जर्मनीलाई शक्तिशाली बनाउन त्यहाँका चान्सलर एङ्गला मर्केलको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
काम र व्यवहारले आफूलाई स्थापित गर्नुभएका मर्केलको राजनीतिक यात्रा सहज भने थिएन ।
विश्वका अन्य सबै मुलुकका प्रमुखमा पुरुषै पुरुष हुँदा उहाँलाई काम गर्न कठिन थियो । तर पनि उहाँले आफूलाई कहिले कमजोर र एक्लो ठान्नुभएन ।
अमेरिका, चीन, बेलायत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री पुरुष हुँदा पनि उहाँले सधैँ आफूलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जसका कारण उहाँलाई विश्वका शक्तिशाली महिलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
यूएन वुमनले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनमा मर्केललाई विश्वका १० शक्तिशाली महिलाहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
१६ वर्षसम्म सत्ता सम्हाल्नुभएका मर्केलले महिलाहरूलाई सपना देख्न पाउने र उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कामदेखि देशलाई विश्वको शक्तिशाली मुलुक बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये एङ्गलाले सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने मध्येको एक हुनुहुन्छ ।
उहाँले युरोपियन युनियनको एक सयभन्दा बढी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभएको छ । उहाँले युरो शङ्कटदेखि कोरोना महामारीसम्मको समस्यालाई झेल्नुभएको छ ।
एङ्गलाले लामो समयसम्म जर्मनीको नेतृत्व गर्दा राम्रो शासकको रुपमा आफूलाई स्थापित गराए पनि त्यहाँका महिलाहरू भने सन्तुष्ट छैनन् ।
जर्मनी बर्लिन क्लबका महिलाहरूका अनुसार एङ्गलाले महिलाहरूलाई सपना देख्न सक्ने वातावरण बनाए पनि जति काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यति गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् ।
जर्मनीमा महिला र पुरुषको पारिश्रमिकमा पनि धेरै फरक रहेको र अहिले पनि महिला र पुरुषबीचमा विभेद रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
तर, एङ्गलाका समर्थकहरूले भने उहाँलाई सम्झिरहने छन् ।
एङ्गलाले महिलालाई उच्च पदस्थ स्थानमा नियुक्त गरे पनि, महिला सल्लाहकारलाई राजनीतिमा स्थान दिए पनि अब जर्मनीको राजनितिक परिवर्तन हुँदैछ भने मर्केल युगको समाप्ती हुन थालेको छ ।
हालै सम्पन्न जर्मनीको आमनिर्वाचनमा मर्केलको पार्टी पराजित भएको छ । मर्केलले सन् २०२१ को निर्वाचनमा नलड्ने यसअघि नै घोषणा गर्नुभएको थियो ।
समाचार संस्था रोयटर्सको एक अध्ययन अनुसार नेपाल, बंगलादेश, न्यूजिल्याण्ड, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुरसहित विश्वका २३ मुलुकको सत्ता महिलाको नेतृत्वमा छ । जसलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
जहाँ महिलाले कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मा सम्हालेका छन्, त्यहाँका सबै क्षेत्रको विकास उत्तम रहेको पनि विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशमा महिला पुगे पनि कार्यकारी मानिने प्रधानमन्त्री पदमा महिला पुगेका छैनन् ।
कहिलेसम्म यस्तो स्थिति रहला ? भन्ने प्रश्नमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले भन्नुभयो, ‘नेपालका राजनीतिक दलमा महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोँच नै विकास हुन सकेको छैन । पितृ सत्तात्मक सोँचका कारण पनि महिलालाई उच्च तहको नेतृत्वमा पुग्न समस्या छ ।’
नेपाली महिलाहरू विद्रोह गर्न नचाहने, गरिहाले पनि त्यसलाई लिएर अडिग रहन नसक्ने परम्पराका कारण पनि नेपाली महिला राजनीतिज्ञ कार्यकारी पदमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की थप्नुहुन्छ, ‘एक त नेपालमा त्यो तहको महिला नेतृ नै छैन । भएकाहरूलाई पार्टीमा भएका पुरुषहरूले नै अघि बढ्न दिएका छैनन् । हेपेर राख्ने, महिलाले राम्रो गर्यो र बोल्यो भने पछि पार्ने जस्ता शैलीले पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न समस्या छ ।’
यो समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँको जवाफ छ, ‘जबसम्म पार्टी पङ्क्ति र स्वयं महिलाले नै सक्रियताका साथ पहल गर्न सक्दैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । पार्टीका सबैले मिलेर महिलालाई अघि बढाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै महिलाले कार्यकारी नेतृत्व पाउन सक्छन् ।’
नेपालको संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि बेलाबखत ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ ।
नेतृत्वमा पुग्नलायक महिला हुँदाहुँदै पनि राजनीतिको गलत संस्कार, निर्वाचन, सत्ता निर्माणमा हुने भागबण्डा, विभेदका कारण कार्यकारी पदमा जानबाट रोकिएको विश्लेषण अधिकारकर्मीहरू गर्छन् ।
महिलाले कार्यकारी पदको जिम्मेवारी पाउँदा उसले महिलाका लागि मात्रै नभइ सबै क्षेत्र, वर्गका लागि काम गर्ने भएकाले महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क पनि कतिपय विज्ञहरूको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २१, २०७८, ०२:१४:००
मुगु, कास्की र अछाममा भएका दुर्घटनाका मृतकका आफन्तलाई सरकारले राहत दिने
नेपाली सेनाद्वारा फूलपाती बढाइँ(फोटो फिचर)
बाजुराको जुड्डी भीरमा पहिरो, कर्णाली नदी थुनियो
क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राखेका सवारीसाधन नचढ्न प्रहरीको अनुरोध
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, एमालेले अवरोध गर्ने